Nepal Dayari | यस्तो पिडा कसैलाई नहोस – ४ दिनको छोरा छोडेर संसारबाट नै बिदा भइन यी आमा ( भिडियो सहित हेर्नुहोस )
यस्तो पिडा कसैलाई नहोस – ४ दिनको छोरा छोडेर संसारबाट नै बिदा भइन यी आमा ( भिडियो सहित हेर्नुहोस )
पुष १६, २०७८ शुक्रबार ८५२ पटक हेरिएको
४ दिनको छोरा छोडेर संसारबाट नै बिदा भइन यी आमा, यस्तो कसैलाई नपरोस्। सामाजिक संजाल टिकटक मा अहिले यो भिडियो @d.k.karki93 नामक आइडी बाट सार्बजनिक भएको छ। केहि दिन अघि मात्र हासीखुसि भिडियो बनाएकी महिला आज भने उनको फोटोमा रिप बुढी ४ दिनको बच्चालाई मैले के जवाफ दिउ भनि पोस्ट भएको छ। को पुरा जानकारीको लागि भिडियो हेरेर थाहा पाउनुहोस।
जंगलमा छ’टपटाई रहेकी युबतिलाई हस्पिटल नलगी किन भिडियो खिचियो ? घ’टना स्थलमै पर्यो च’र्का’च’र्की (भिडियो सहित हेर्नुहोस)
खोटाङ जिल्लाको रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका १ दिक्तेलकी रहेको बुझिएको छ । उनी उर्लाबारीमा बसेर पढ्दै आएको खुलेको छ । पथरी-कानेपोखरी क्षेत्रको जङ्गलमा उनी त्यसरी भेटिएको बुझिएको छ । उनी त्यहा किन आइन भन्ने अहिले सबैको चासोको विषय बनेको छ । उनको छेउमा एउटा पानीको बोतल र झोला देखिन्छ । झोला र बोतल हेर्दा उनी त्यहा आफै आएकी हुन कि भन्ने पनि लाग्छ । तर किन त्यो जंगलमा आईन भन्ने खोजी भै रहेको छ ।
उक्त भिडियो टिकटकमा पोस्ट भएको भोलिपल्ट फेरि उनको भिडियो रि’प कमला भनेर पोस्ट भएको थियो । त्यसपछी भने थुप्रैले उनको फोटो तथा भिडियोमा रि’प लेखेका पोस्टहरु आएका थिए । उनी जि’उँदो हुदा भिडियो बनाएर बस्नेहरुले उनलाई के भएको हो भनेर तेत्रो भिडले किन बुझ्न खोजेन साथै किन ती युवतिलाई अस्प’ताल लान खोजेन भनेर अहिले थुप्रै बि’रोध भै रहेको छ । साथै उक्त भिडियो पोस्ट गर्ने दाहाल कल्पना नाम गरेको आइडिको पनि खोजी भै रहेको थियो ।
जंगलमा छटपटाई रहेकी युबतिलाई हस्पिटल नलगी किन भिडियो खिचियो ? घ’टना स्थलमै पर्यो च’र्का च’र्की। पुरा जानकारीको लागि भिडियो हेरेर थाहा पाउनुहोस।